Rain in the East by Tay Zar Soe Lwin - issuu
မို့ရေစကးမ်ာ့၏ သုညအတ္တအငးအာ့ မို့ခါ့ကြီ့ရြာသြာ့ပြီဆိုတောံ ဇနပုဒးငယးလေ့တစးခုဆီသို့သူရောကးလာခဲံသညး။ ရညးရကြးခ်ကးမရွိဘဲ ရောကးလာချဲံခငျး့ဖစး၏။ ယခငးဤရြာလေ့ ရွိကြောင့းပငးမသိ။ ဤရြာကလေ့တငြးနေထိုငး ကြသော လူမ်ိူ့စု သဵု့ခုအကြောင့းကိုလည့း ကြာ့ပငးမကြာ့ဖူ့ခဲံပေ။ ဤရြာကလေ့၌ မို့ခါ့ကြီ့ရြာသြာ့ပြီ့ သောကးသဵု့မိသူမ်ာ့ရူ့သြာ့ကြောင့း၊ မသောကးဘဲ နေသူမ်ာ့က လည့း ကေ်ာကးရုပျးဖစးက်နးခဲံကြောင့း သတင့းနွငးံအတူ ဤရြာမွလူမ်ာ့၏ ရွေ့ဟောင့းသခ်င်္ာ နည့း စနစးမ်ာ့ကို သူသိခဲံရျခငျး့ဖစးသညး။ မို့ခါ့ကြီ့ ရျြာခင့း၊ ရူ့သပြျးခင့း ၊ကေ်ာကးရုပျးဖစျးခင့း၊ စသညးံ သတင့းမ်ာ့ထကး ရွေ့ဟောင့း သခ်င်္ာ နည့းဆိုငးရာသတင့းက သူ့ကို ပိုမိုဆေြဲ ဆာငးနိုငးခဲံသညး။ လေံလာ ဆည့းပူ့ခ်ငး စိတးမ်ာ့တဖြာ့ဖြာ့ ပေါ်ပေါကးလာပြီ့နောကး သူဤ ရြာသို့ ရောကးလာခဲံရျခငျး့ဖစးလေသညး။ မို့ခါ့ရေ သောကးထာ့ပြီ့သူ တေဟြာ အသးစိတး မရွိကြတောံ။ သူတို့ျေပာနိုငးတာ တခ်ကးဘဲ က်နးရစး ခဲံသညး။ ထိုအခ်ကးကတောံ သူတို့ သောကးခဲံသညးံ မို့ခါ့ရေခကြးအရေအတကြး ကိုျေပျာပ နိုငျးခငျး့ဖစး၏။ မို့ခါ့ရေက အတေားဆေြဲ ဆာငးမှုရွိပဵုပဲ ထိုသို့ ပငးသူမွတးခ်ကး ခ်မိ၏။ မသောကးရ မနေနိုငးအောငးနွငးံ သောကးမိသူကိုလဲ ထပးထပးသောကး ခ်ငးနေစိတးရွိအောငး ဆြေဲဆာငးဖမ့းစာ့နိုငးခဲံပဵု ရသညး။ အခ်ို့လူမ်ာ့သောကးခဲံ သညးံ မို့ခါ့ရေခကြး အရေ အတကြးက အတေားမ်ာ့လေ၏။ ထိုခကြးအရေ အတကြးမ်ာ့ကို သူတို့၏ရွေ့ဟောင့း သခ်င်္ာ ညွှနျးပခ်ကး နည့းမ်ာ့အတိုင့းညွှနျးပ သြာ့ ကြ၏။ ထိုညွှနျးပခ်ကးနည့းမ်ာ့ကို သူစိတှးငးတစာ့လေံလာ မိလေသညး။ အစုသဵု့စုခြဲ ပြီ့သူလေံ လာလိုကးရ၏။ ပထမ အစုမွ လူအမ်ာ့သညးဓာ့မ်ာ့ွှေ့ရမ့းပြီ့ ပါ့စပး မွလည့း ရေ- - -ရေ - - -ဟု ညည့းတြာ့နေ ကြ၏။ သူတို့ သောကးခဲံသော တစးဦ့စီ၏ ခကြးအရေအတကြးမ်ာ့ကို သစးပငးမ်ာ့ပေါ်မွာ သူဖတးခဲံ ရ သညး။ ပငးစညးပေါ်မွာ ဓါ့နွငးံ အထစးကလေ့မ်ာ့ ထစးပြီ့ ခကြးအရေ အတကြးကို ရေ့မွတးကြ သူမ်ျာ့ဖစးသညး။ ဓါ့ထစးတ ထစးလ်ွငး တခကြျးဖစးသညး။ ဒုတိယ အစုမွလူအမ်ာ့ကတောံ လကးထဲမွ ကြို့မ်ာ့ကို ဆြဲခ်ညး ဆန့းခ်ညး လုပးရင့း တဟင့းဟင့း အေားနေကြ ၏။ သူတို့ သောကးခဲံသညးံ ခကြး အရေ အတကြးကို သူတို့လကးထဲမွ ကြို့မ်ာ့မွ တဆငးံ သိ ရ၏။ သူတို့ က ကြို့ကို အထဵု့ကလေ့ထုဵ့ရင့း မွတးသာ့သြာ့ကျြခငျး့ဖစး၏။ ကစြးပူ (ွ်ကငစက) ပဵုစဵပါလာ့ သူ... အလနြး သဘောက်သြာ့၏။ ထိုသို့ကြို့အထဵျု့ဖငးံ ရေတကြးမှုသဘောတရာ့ကို တောငးအမေ ရိကတိုကးမွ အငးကာ လူမ်ို့မ်ာ့ လည့းသဵု့စဖြဲူ့၏။ လေံလာရ အခကးခဲဆဵျု့ဖစးခဲံသညးမွာ တတိယ အုပးဈုဖစးသညး။ တတိယ အုပးစုမွလူမ်ာ့သညး လမ့းမပေါ်မွာ ကခုနးနေကြ၏။ ဘာစကာ့ကိုမွ မျေပာကြ။ သို့သေား သူတို့၏ မ်ကးလဵု့မ်ာ့ထဲမွ မတြးသိပးမှုကို တြေ့နေရသညး။
အာ့ပါ့ပါ့....မလယြးပါလာ့ သူတို့၏ ကခုနးမှုမွာ သူတို့သောကးခဲံသညးံ ခကြးအရေ အတကြးကိုညွှနျးပနျေခငျး့ဖစးသညး။ ခန္ဓာကိုယး အစိတးအပိုင့းမ်ာ့ကို ကိန့းဂဏာန့းမ်ာ့ အျဖစး သင်္ကေတျပုကာ ဖောျးပ နေကျြခငျး့ဖစး၏။ အဓိပ္ပါယးဖတးရနး အတေား ခကးခဲလေသညး။ ဤကဲံသို့ သော ရေတကြးမှုပဵု စဵကို နယူ့ဂီနီ လူမ်ို့မ်ာ့ လည့း သဵု့စြဲ ကြ၏။ သူ..ကြို့စာ့ပမ့းစာ့ လေံလာယူရလေသညး။ က်ေနပးအာ့ရ မှုလည့းရွိခဲံ၏ ။ လေံလာမှုမ်ာ့ပြီ့ဆဵု့ပြီဟု ယူဆသော အခ်ိနးက်မွ.... အင့း. .ကေ်ာကျးဖစးတဲံလူကို သြာ့ကြညးံရဦ့မယး။ မို့ခါ့ရေမသောကးဘဲ တောငးံခဵနေသျဖငးံ ကေ်ာကျးဖစးသြာ့သူမွာ တယောကးတညျး့ဖစး၏။ (က်နးလူ မ်ာ့အာ့လဵု့မွာ မို့ခါ့ရေ သောကးပြီ့ရူ့ သြာ့ကြ၏။) ထိုလူသညး သို့မဟုတး ကေ်ာကးရုပးသညး အှေ့သို့ လွမ့းကြညးံနေ၏။ ကေ်ာကျးဖစးနေသော မ်ကးလဵု့ မ်ာ့ကတောံ ဘာကိုမျွမငးပဵုမပေါ်။ ထိုကေ်ာကးရုပးကိုလွညးံပတးကြညးံ ရှုရင့းသူ. .သကျးပင့းခ်မိ၏။ျဖစးမွ- -ျဖစးရလေ ထိုလူအတကြး စိတးမကောငျး့ဖစးရင့း သူ့စိတးထဲမွာလဲစိမးံပြီ့ကြောကးလာ မိ၏။ အင့း.. အချုပနးတာဘဲ ကောင့းပါတယး.. ထိုအခိုကးမွာပငး... ရုတးခ်ည့းဆိုသလို ကောင့းကငးသညး ညိုမှိုင့းသြာ့၏။ှေမှုနးသေားလဲ ကြမ့းတမ့းသညးံလေတို့က အေ့ရွစြာ က်ဆင့းလာသညး။ တစးစဵုတစးခုသော ရနဵ့ကို ရှု ရှုကးလိုကးရပြီ့ . . . ဟငး...မို့ခါ့ကြီ့ ထပးရြာတောံမယး ရငးထဲမွာ ပူလောငးပြီ့ ကမ္မာပ်ကး သြာ့သလို ခဵစာ့လိုကးရသညး။ လေထဲမွာမို့၏ အငြေ့ အသကးတို့ ပါလာသညး။ သူ့အပေါ်က်လာသော မို့စကးမို့မှုနး ပ်ပ်ကလေ့ မ်ာ့ကို လကးနွငးံွှေ့ယမ့းကာကယြး နေမိ၏။ ဂ်ိမ့း....ဂ်ုန့း မို့ခြိမ့းသဵ ကြီ့ကျေခာကျးခာ့ ဖယြးရာ ပေါ်ထကြးလာသညး။ သဲကြီ့မဲကြီ့ရြာတောံ မညးမွာသေခ်ာ၏။ သူ ယောကးယကးခကးျေပ့လွှာ့နေမိသညး။ ဤမို့ကို ကာကယြး၍ရတောံမညး မဟုတးကြောင့းကို လည့း သိလိုကးရသညး။ လူမ်ာ့ကို ဒုက္ခဆို့ အမ်ို့မ်ို့ပေ့ခဲံသော မို့ခါ့ကို သူပကးပကးစကးစကး ဆဲဆိုရင့း လမ့းပေါ်မွာ ခုနး ပေါကးနေမိ၏။ ပြီ့ ... လိုအပးခ်ကးတစးခုကို သတိရပြီ့ . .ဘေ့ဘှီဲယာဆီလွေ်ာကးကြညးံ မိသညး။ ဓါ့တစးလကးကို တြေ့သညး။ ကောကးယူပြီ့ သစးပငးဆီသို့ျေပ့သြာ့ကာ ပငးစညးမွာအထစးလုပးကြညးံ၏ ခုတးကြညျးံခငျး့ဖစးသညး။ သို့ သေားဘာ တစးခုမွ ထငး မက်နး၊ ဆြေ့ျေမ့နေပျြီဖစးသော ဓာ့ကြီ့က ကြို့ သြာ့၏။
တောကး . . . လမ့းမပေါ်မွာ ကြို့တခေ်ာင့းကိုတြေ၍ ကုန့းကောကးရသေ့သညး။ ကြို့ကို အထဵု့လေ့မ်ာ့ရစး ခ်ညး ကြညးံ ၏။ မရခေ်။ ထို ကြို့ထဵု့နည့းကို သူမထဵု့တတး၊ ပဵုစဵုမ်ို့စဵုနွငးံ ကမန့းကတန့း ခ်ညးကြညးံ နေပြီ့ မရလနြ့းသညးံ အဆဵု့မွာ ထိုကြို့ကို ဒေါသ တကြီ့ လွှငးံပစးလိုကး၏။ နောကးဆဵု့ အနေနွငးံ ကိုယးအင်္ဂါ အစိတး အပိုင့းနွငးံ ဖောျးပနိုငးရနး သူကြို့စာ့ရသညး။ မို့စကးတြေ က လည့းခပးပါ့ပါ့ က်ရောကးနေပျြီဖစး၏။ သို့ သေားလည့း ဒူ့ျေမာကး လကျးေမာကး လုပးနေရျခင့းသညး သူ့ အတကြး အဆငးမျေပလွခေ်။ ကိုယး အင်္ဂါ အစိတးအပိုင့းမ်ာ့မွ တဆငးံ ကိန့း ဂဏာန့းကို ဖောျးပနေသလို မျဖစးဘဲ ဓါတးလိုကးနေသလို ၊ ဘရိတးဒန့း ကနေသလို လျိုဖစးနေသညး။ ဒုက္ခပဲ ထိုသို့ ဆိုရငးတောံ တနည့းဘဲ က်နးတောံသညး။ ကေ်ာကးရုပးရွိရာကို သူအျေပ့သြာ့လိုကး၏။ မို့ခါ့ရေကို သူမသောကးဘဲ ကေ်ာကးရုပး အျဖစးခဵတောံမညး။ ကေ်ာကးရုပး၏ နဘေ့မွာ သှူငးရပးသညး။ ရပးရပျးခင့းမွာတောံ လကးနွစးဘကး တြေဲလာင့းခ်ပြီ့ တောငးံ တောငးံ ကြီ့ရပးနေလိုကျးခငျး့ဖစးသညး။ ထို့နောကးမွာမူ နောငးလာနောကးသာ့တြေ အျမငးမွာ သူ့ ကေ်ာကးရုပးလွပရနး လိုအပးကြောင့း ကိုသတိရသညး။ ထိုသိျု့ဖငးံ တစောငျး့ပငးရပးသညး။ ခါ့မွာ လကးထောကးရပး၏၊ ဆဵပငးကို ပငးံတငး ရသေ့သညး။ ဓါတး ပဵုဆရ ရွေ့မွာ အိုကးတငးပေ့သညးံနွယး သူ့ကိုယးဟနးကို အမ်ို့မ်ိျု့ပုပငးနေရ၏။ သိပး အခ်ို့မျေပသလို ခဵစာ့မိ၏။ မို့ကြီ့ကရြာ လာပြီ။ ထိုအခါက်မွ ပန့းပုရုပးတစးခု ၏ကိုယး ဟနးကို သတိရပြီ့ သူထိုငးခ်လိုကးသညး။ ကမ္ဘာကေ်ား ပန့းပုဆရာကြီ့ သြဂတးရိုဒငး၏ အတြေ့အခေါ် သမာ့ (ွှံငညုနမ ) အမညးရွိ ပန့းပု၏ ကိုယးဟနးအတိုင့း သူထိုငးနျေခငျး့ဖစးသညး။ ဒဿန တစးခုခုကို အလေ့အနကး စဥ့းစာ့တြေ့ခေါ်နေဟနး . . မို့ကြီ့က တှေှါေါ ရြာခ်လာ၏။ အာ့ . .အေ့လိုကးတာ ခိုကးခိုကးတုနးအောငး ခ်မ့းအေ့နေသေားလည့း ဤကိုယးဟနး အနေအထာ့ကိုမပ်ကးအောငး သူထိုငးနေ ခဲံ၏။ တစးကိုယးလဵု့လဲ စိမးံစကး ရွှဲစိုနေပြီ။ ထိုငးရတာလဲ ပငးပန့းလွပြီ၊ မို့ကြီ့ရြာတာလဲ ကြာပြီ။ နောကးဆဵု့ ဆဲခ်ိနးက်မွ ဤမို့သညး မို့ခါ့မဟုတး ရို့ရို့ မိျု့ဖစးမွန့း သူသိရ၏။ .... ဘျာေပာရမွန့းပငးမသိ။ အူကြောငးကြောငျးဖငးံ သျူပနးထလိုကးရသညး။ ထကြးခြာရနျးပငးခ်ိနးရောကးမွ သူ့ ကို စိုကးကြညးံနေသော မ်ကးလဵု့အစဵုမ်ာ့ကျိုမငးလိုကးရသညး။ ဟငး ကိုယးံ အပူနွငးံ ကိုယျးပာလောငးခတးနေခဲံ၍ ထိုလူမ်ာ့ကို သူသတိမထာ့မိခဲံ။ ( ဘယးအခ်ိနးထဲက ရောကးနေကြမွန့းမသိ)
သူ့လိုဘဲ လာရောကးလေံလာ သူမ်ျာ့ဖစးပဵုရသညး။ သူ့ကို ကြညးံနေကြရင့းတယောကး ကျေပာ၏။ အရူ့တေထြဲ ဒီအရူ့အဆို့ဆဵု့ဘဲနေား အေ့လေ . . . မို့ခါ့ရေတြေ သူဘယးနွစးခကြးလောကး သောကးပစးလိုကးလမွဲ မသိတာ။ အမ်ာ့တဵု့သောကး ပြီ့ အရူ့ဆဵျု့ဖစးသြာ့ တာနေမွာပေါံ။. . .ကျြတး. .ကျြတး. .ျဖစးမျွဖစးရလေ သူတို့အာ့လဵု့က သူ့ ကို စိတးမကောင့းစြှာိုင့းကြညးံနေကြလေသညး။
တာရာမင့းှေ အမွတးတရ( နေရဲ့ အင်္က်ီ စာအုပးမွ) ______________________________________________________________
by Tar Yar Min Wai